चियाको सौखिन हुनहुन्छ ? जानिराख्नुहोस् चियाका यी ७ आश्चर्यजनक फाइदा:: Naya Nepal
चियाको सौखिन हुनहुन्छ ? जानिराख्नुहोस् चियाका यी ७ आश्चर्यजनक फाइदा
०७७ साल असोज १२ गते सोमबार, ई स ०२० सेप्टेम्बर २८ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
वि.सं.२०७७ असोज -१२,सोमवार,ई.सं.२०२० सेप्टेम्बर – २८,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४०,प्रमादी,दक्षिणायन-शरद,अधिक आश्विन शुक्लपक्ष तिथि-द्वादशी , २१:४५ बजे उप्रान्त त्रयोदशी,नक्षत्र-धनिष्ठा , २४:२८ बजे उप्रान्त शतभिषा,योग-धृति , २२:०८ बजे उप्रान्त शूल,करण-वव ०९:३४ बजेदेखि वालव , २१:४५ बजे उप्रान्त गर,चन्द्रराशि-मकर,आनन्दादि योग-शुभ, सूर्योदय-०५:५५, सूर्यास्त- १७:५१,दिनमान-२९ घडी ५० पला,धनिष्ठा पञ्चक ११:५६ बजे प्रारम्भ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागि भई समाजको काम गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ । नबिनतम् बिचारको प्रयोग गरि सामाजिक काम गरि नाम तथा दाम कमाउन सकिनेछ । सानो लगानिबाट सुरु गरिएका व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानि हुनेछ भने आर्थिक स्थिति मजभुत हुनेछ । मध्यान्हबाट सरकारी काममा सेवा प्रभाव गर्नेहरुले समयमा काम नगर्दिनाले बिभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्नेछ।
लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ । धार्मिक अनुष्ठान तथा मन्दिरमा गई टिका तथा प्रशाद ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । नयाँ काम पाउँने तथा बढुवा हुँने योग रहेकोछ । बौद्धिक ब्यात्तित्व तथा बिशिष्ट ब्यात्तिहरु सँग भेटघाट हुनेछ भने नयाँ योजना बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा लगि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले भौतिक सम्पति तथा विलाशी बस्तुको व्यापार गरि मनग्गे धन सम्पति जोड्न सकिनेछ । लामो दुरिको व्यापारीक यात्रा हुनेछ । पढाई लेखाईमा एक कदम अगाडि बढि सफलता हात पार्न सकिनेछ। मध्यान्हबाट सामान्य बिवादले अपठरो परिस्थितिमा लैजान सक्छ ध्यान दिनुहोला । पुराना समस्या बल्झने तथा नया समस्याहरु थपिनेछन्। अध्ययन तथा अनुशन्धानमा समय खर्चिए पनि भनेजस्तो उपलब्धि नहुदा तनाब बढ्नेछ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले जागिर वा अध्ययनमा हुने प्रतिस्पर्धामा तपार्यँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । मध्यान्हबाट व्यापारको सवालमा लामो दुरिको यात्रा हुने भएपनि कष्टकर हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । घर परिवार तथा आफन्तसँग मनमुटाब सिर्जना हुने योग रहेकोछ । जीवन साथि सँग एक्कासि हुने मनमुटाबले महत्वपुर्ण उपलब्धि गुम्न सक्छ ध्यान दिनुहोला।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा प्रविधिको प्रयोग गरि राम्रो नतिजा ल्याउन सकिनेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेकोछ । मध्यान्हबाट हुलमुलमा बिवादमा फस्ने योग रहेकोछ ध्यान दिनुहोला । न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । आर्थिक रुपमा केहि कमजोरी भएको महशुष हुनेछ । पुराना रोग तथा समस्या हरु पुनह बल्झिन सक्छ ध्यान दिनुहोला।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जाने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजनका साथ रमाउन सकिनेछ । मध्यान्हबाट आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ । माया प्रेममा अबिश्वास बढ्ने हुँदा आजको दिन नभेट्दा नै राम्रो रहनेछ । साना तिना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउँनेछन्।
प्रतिभाको उच्च मुल्यांकन हुनुका साथै सामाजिक रुपमा ख्याति बढ्नेछ । सिमित स्रोत साधनको प्रयोगबाट असिमित आवस्यक्ता पुरा गर्न सकिनेछ भने आर्थिक ब्याबस्थापनका पुराना मुद्दाहरु हल भएर जानेछन् । हाते औजार तथा घरेलु मेसिन प्रयोग गरेर आम्दानिका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको समर्थन पाईने हुँनाले समाज परिवर्तन गर्न जोस जागर बढेर आउनेछ।